बिहीबारको दिनमा बिष्णुभगवानको पुजा गर्दैमा फल प्राप्ती हुन्छ त ? यस्तो छ पुजा बिधी जान्नुहोस् - Sabal Post
बिहीबारको दिनमा बिष्णुभगवानको पुजा गर्दैमा फल प्राप्ती हुन्छ त ? यस्तो छ पुजा बिधी जान्नुहोस्
१४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
कसरी पूजा गर्ने ? पूजा विधि – बिहान स्नानपछि पहेलो वस्त्र धारण गर्ने । त्यसपछि पहेलो फूल र चन्दनलाई एक साथ मिलाएर प्रसाद बनाउने । यस प्रसादलाई भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गरौँ । यसबाट भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उहाँको आर्शिवाद तपाईंको घरमा सधैँ भइरहने छ । यो व्रत १३ महिना वा कम्तिमा ७ महिनासम्म लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । व्रतको दिन शुद्ध भएर पहेँलो कपडा लगाई ‘ऊँ गुरवे नमः’ मन्त्र कम्तिमा पाँच माला जाप गर्नुपर्दछ । बिहीबारको व्रत सम्पादन गर्दा केराको रुखलाई पूजा गर्ने चलन छ । पूजा गर्दा पहेँलो चन्दन, चनाको दाल, छाता, मिठाईको रुपमा लड्डु आदिको दान गरेमा लाभ मिल्नेछ । भोजन गर्दा एक छाक नुन बार्नुपर्दछ ।
पौराणिक कथाअनुसार एकजना प्रतापी र दानी राजा थिए । उनको दरबारमा असाध्यै धेरै सम्पत्ति थियो । उनी प्रत्येक बिहीबार व्रत बस्ने तथा पुण्यकर्म गर्ने गर्दथे । तर रानी भने त्यस्तो केही कर्म गर्दिन थिइन् । राजाले गरेको धार्मिक कार्यलाई रानीले असहयोग गर्थिन् । दरबारमा थुप्रिएको सम्पत्तिका कारण आफुले धेरै काम गर्नु परेकोमा उनी चिन्तित हुन्थिन् । एक दिन गुरु वृहस्पति उनको दरबारमा साधुको रुप धारण गरी पुगे । त्यसबेला राजा शिकार खेल्न जंगल गएका थिए । रानीले साधुलाई देखेर आफ्नो दरबारमा भएको सम्पत्ति तथा वैभव समाप्त पारिदिन आग्रह गरिन् । साधु रुप धारण गरेका गुरु वृहस्पतिले पनि रानीको चाहना पूरा गर्न फल प्राप्ति हुने कर्म भन्दा पनि नष्ट हुने कर्म गर्न सिकाउँछन् । रानीले बिहीबारको दिन त्यसै गर्छिन् ।
दरबारको सम्पूर्ण वैभव समाप्त हुन्छ । दुःख पाएपछि राजा कामका लागि परदेश लाग्छन् । दरबारमा भएका रानीहरुले पनि भोकभोकै बस्नु पर्ने दिन आउँछ । यो दुःखका बीच रानीले आफ्नी बहिनी कहाँ सहयोग माग्न पुग्छिन् । बहिनीले उनीहरुलाई धन प्राप्तिका लागि बिहीबारको व्रत बस्न सुझाउँछिन् । त्यसपछि रानी र उनका दासीहरु बिहीबारको दिन व्रत बस्न थाल्छन् । व्रत बस्न थालेदेखि फेरि दरबारमा सम्पत्ति थुप्रिन थाल्छ । दरबारमा सुख मिल्न थाल्छ । परदेश गएका राजा पनि फिर्ता आउँछन् । त्यसैले बिहीबारको दिन व्रत बसेको खण्डमा सम्पत्ति तथा वैभव प्राप्त हुने जनविश्वास छ ।
सेभेन ए साइड प्रतियोगिताको तयारी सम्पन्न, पूर्वमन्त्री…
मन्दिरमा पसल सटर नबनाउन मन्त्रालयको पत्र
सर्वोच्चको आदेश : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा…
गण्डकी प्रदेशमा थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण…
पुनम र नमराजको ‘आरम गर ओली’ले तहल्का पिट्दै
प्रादेशिक अस्पतालसंग कर्मचारी नियुक्ति र अवकासबारे सूचना माग
रोटरी क्लब अफ रुपन्देहीमा पदस्थापन,सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने
कोरोना अपडेट विश्वभर संक्रमिको संख्या एक करोड ३० लाख ४९…
सुनको मूल्य तोलाको ९२ हजार तीन सय
काठमाडौंमा मयूर यातायातको सेवा सुरु
१२० वटा बाख्रा पाठा वितरण
संखुवासभामा राहत र उद्वारमा जुटन कांग्रेस नेता खड्काको आग्रह ।
धनन्जय नरसिंह के सीको नेतृत्वमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको नयाँ…
वित्तिय साक्षरता सम्वन्धी अभीमुखीकरण कार्यक्रम